Mouse – Gold Channel Movies
9.7 83 votes
Episode 11 Apr. 07, 2021
Episode 12 Apr. 08, 2021
Episode 13 Apr. 14, 2021
Episode 14 Apr. 15, 2021
Episode 15 Apr. 21, 2021
Episode 20 May. 06, 2021
Special Ep May. 13, 2021
Episode 22 Jul. 27, 2021
ဒီတစ်ခါတော့ True Beauty အစားလာမယ့် Mouse ဆိုတဲ့ ဒရာမာလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ဆိုက်ကိုပါ့သ်လူသတ်သမားနဲ့ ကြုံတွေ့ရတဲ့ ရဲအရာရှိနှစ်ဦးအကြောင်းကို ဇာတ်အိမ်တည်ပြီးရိုက်ကူးထားပါတယ်။
Jung Ba Reum (Lee Seung Gi) ဟာ ရဲအရာရှိပေါက်စလေးဖြစ်ပြီး လူအများကို ကူညီရတာကို ပျော်ရွှင်တဲ့သူပါ။ ရပ်ကွက်သူရပ်ကွက်သားတွေကို အမြဲကူညီတတ်ပြီး အထူးသဖြင့် သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို အမြဲစောင့်ရှောက်ပြီး သူတို့ရဲ့ဝေယျာဝစ္စတွေကို လုပ်ကိုင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီဖော်ရွေတတ်တဲ့ ရဲသားလေးဟာ တစ်နေ့မှာတော့ ဆိုက်ကိုပါ့သ် လူသတ်သမားနဲ့တွေ့ပြီး ဘဝကြီးက တစ်ဆစ်ချိုး ပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ်။
Go Moo Chi (Lee Hee Joon) ကတော့ အသတ်ခံရတဲ့မိဘတွေအတွက် ကလဲ့စားချေဖို့ရဲဖြစ်လာသူပါ။ သူ့ရဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့စရိုက်ကြောင့် ရဲထက် လူဆိုးနဲ့ပိုတူနေတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူမတူတဲ့စွမ်းရည်နဲ့ထက်မြက်မှုတွေကြောင့် စခန်းမှာ ရာဇဝတ်သားအများဆုံးဖမ်းပေးထားတဲ့စုံထောက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ရာထူးတိုးကို ငြင်းဆန်လေ့ရှိပြီး သူ့မိဘတွေကိုသတ်ပြီး ထောင်ကျနေတဲ့ လူကိုပဲ လက်စားချေချင်နေသူပါ။ သားရဲလို့ အမည်ရတဲ့ ဆိုက်ကိုပါ့သ်လူသတ်သမားကို ဖမ်းဖို့ ကိုယ့်ကိုယ့်ကို မကောင်းဆိုးဝါးအဖြစ်ခံနိုင်တဲ့ ရဲပါ။
Oh Bong Yi (Park Ju Hyun) ကတော့ တိုက်ရည်ခိုက်ရည်ရှိတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသူလေးပါ။ အဖွားဖြစ်သူနဲ့နေပြီး စိတ်ထဲရှိတာကို ဘွင်းဘွင်းပြောတတ်တဲ့သူပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စလေးတစ်ခုကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ အမြဲကြိုးစားနေတဲ့သူပါ။ အမြဲလိုလို အသင့်အနေထားနဲ့ရှိနေပြီး ကျောင်းလွယ်အိတ်ထဲ လက်နက်အစုံထည့်သွားတတ်ပါတယ်။
Choi Hong Joo (Kyung Soo Jin) ကတော့ OBN ရုပ်သံလိုင်းက နာမည်ကြီးသတင်းထောက်ပီဒီပါ။ သူမဟာ တိကျတဲ့သတင်းတွေကို အသေးစိတ်ကျတဲ့အချက်အလက်တွေဖြင့် တင်ဆက်ပေးမှုကြောင့် နာမည်ကြီးပါတယ်။ သတင်းတွေရဖို့ ရဲစခန်းတွေကို ဝင်ထွက်သွားလာလေ့ရှိပြီး သူမရဲ့အာရုံကို ဆိုက်ကိုပါ့သ်လူသတ်သမားက ဖမ်းစားထားပါတယ်။ သူမဟာလည်း လျှို့ဝှက်ချက်အပြည့်နဲ့ ကာရိုက်တာတစ်ဦးပါ။
ဒီကားလေးကတော့ လျှို့ဝှက်သည်းဖိုဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ကားကောင်းလေးဖြစ်မှာပါ။ ဆိုက်ကိုပါ့သ်ကို မိခင်ဗိုက်ထဲမှာတည်းက မျိုးရိုးဗီဇအရခန့်မှန်းနိုင်သလား။ အဲ့လိုခန့်မှန်းနိုင်ခဲ့ရင် ဒီကလေးကို ဆိုက်ကိုပါ့သ်မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုမွေးမြူကြမလဲဆိုတဲ့ concept ကို ထည့်သွင်းရိုက်ကူးထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
လက်မလွတ်သင့်တဲ့ကားကောင်းလေးမလို့ GC Dramaရဲ့ တင်ဆက်ပေးမှုကို အပတ်စဉ် ကြာသာပတေး နဲ့ သောကြာနေ့တွေမှာ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦး
Nwe NiMay 19, 2021Reply
Yu NgeMay 14, 2021Reply
Don’t you upload episode 18 and 19 till yet, dear admin?
Victor NailerMay 14, 2021Reply
Ep 18 19?
Yan Naing WinMay 12, 2021Reply
Plz all ep reload
LeoApril 20, 2021Reply
နောက်ထပ် episode တွေတင်ပေးပါဦး
AKTApril 3, 2021Reply
G drive nae ep7 pyan tin pay par larr file ka pyat nay lo.
SaartMay 19, 2021Reply
google drive ထဲမှာသိမ်းထားတာရှိတယ် FHD အစက​နေ အခုထွက်တဲ့အထိ
Kyaw ko ko khineApril 1, 2021Reply
Mega is not available for download due to stowage.Do you have any idea to download with mega
el paingApril 2, 2021Reply
Gmail acc Sign in loke like kyi par lrr bro mega htay mar mega acc loke like gmail nal 70GB lrr ma thi vuu ya tal aye say
Aung Zaw HtetApril 12, 2021Reply
Desktop version ne down par
Aung LayApril 15, 2021Reply
Eps13 is blocked now.
Ep 13 FHD version ရှိတယ်
ယူမလား Google drive ထဲမှ္